Qeybtii Labaatan Iyo Toddobaad Sheeko Xiiso Badan ’27’ ‘Dhibaatadii Tahriibka Aan Kala Kulmay Iyo Tusmadii Nolosheyda’.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: October 19, 2015, 3:03 am
Sheekadaan oo taxane inoo noqon doonto haduu eebe nafta nagu simo ayaa shabakada kobciye.com ka daalacan doontaa isbuucii labo mar illaa sadax mar hadii aay qeybihii hore ku dhaaftay
RIIX HALKAAN OO AKHRISO SHEEKADA QEYBAHEEDII HORE HADII AAY KU DHAAFTAY
BILLOOWGA QEYBTII LABAATAN IYO TODDOBAAD
Feysal: Hooyo ilaa iyo shalay oohin iyo murugo baa ku jirtaa.
Maymuun: wiilkeyga markii uu halkaan imaado wejigee ku hor istaaga? Waajibaadkeygii sodohnimo ma aanan gudan. Fowziyo waa gabar fiican qalad baan ka galay.
Feysal: hooyo caadi waaye waxaas adiga hais raa raacin. bin aadam ka waxaa ugu fiican kan inta qalad gala hadana qirto.
Waxaa soo dhacay telefoon kii xaafada…..
Maymuun: qabo wiilkeyga …..
Feysal: haye hooyo Anaa qabanaayo… Halow
Fowziyo: cod keyga waa aqoon satay baan u malaynaayaa…
Feysal: haa si fiican.
Fowziyo: waraaqadeyda furiinka Hal daqiiqo yeysan kugu qaadanin.
Feysal: waa balan, hadaan qalad kaa galay Walaal iska Kay cafi.
Fowziyo: waaba isasaartay telefoonkii.
Fartuun: Haye maxuu ku yiri.
Fowziyo: Maxaa kale waa noo kala dhamaatay.
Fartuun: inta kale caruurtaada aabahood sida u xalin laheed adaa lagaa rabaa anaga dhaxdiina waa ka baxaynaa.
Fowziyo: haye hooyo hada Khaalid baan rabaa inaa Waco.
Fartuun: wac ani waan ba baxaayaa, il fuur yaan kugu noqonine.
Fowziyo: dhib malahan hooyo.
Fartuun: caruurtaan ani waa i wareeriyeen, soo bax waryaa dugsi waa diiday moohoo waryaa Yacquub damiin.
Yacquub: Ayeeyo ani dugsi marabi.
Fartuun: iyaah waryaa soo bax adoo intaa le’eg aaba dugsi iidiidaysa Miyaa markii weynaatid maxaa mooda.
Yacquub: macalinka wuu i tumaa, inyow ani dugsi ma aadaayi.
Fartuun: iyaah maxaa itiri adiga Miyaa macalin ku tumaayaa. Hada i tus macalin ka ku tumay Anaa soo tumaaye.
Fowziyo: hooyo waa beentiis cudur daar uu dugsiga ugu gembiyo uu rabaa.
Fartuun: maya maya caruurta macalin tumaayo ma arki karo Aniga.
maanta iska joog beri subax baan isku raacaynaa yaah.
Yacquub: haye ayeeyo…..
Fowziyo: halow Abaayo Khaalid mala hadli karaa.?
Hindo: haa hadase ilama joogo wax Yar sug aan kuugu yeeree. Adoo raaliya qofka aad tahay ma ogaan karaa?
Fowziyo: Aniga Qalbi Ayaan ahay intaas ku dheh isagaa garanaayo.
Hindo: haye inyar ii dul qaado.
Burhaan: Yaa rabtay ?
Burhaan: Ee ma joogee Baasaboor buu soo samay sanaayaa. kiisa meel baa ka qaldan Tay magaca loo hagaajinaayay.
Hindo: saas hadii ay tahay gabar baa rabtay, een halow Abaayo hada ma jooge waxaan u malaynaayay in uu joogo waan u sheegaayaa Qalbi soo maahan.
Fowziyo: haa mahadsanid Abaayo.
Hindo: adaa mudan.
Burhaan: Qalbi? Mayee qabiil magac Miyaa waxaas….
Hindo: yarow shaqo yeelo dadka haku mashquulin.
Mulki: sidaa ogtihiin galabtaan baxaaya ee qof ii xanaaq San amuu jiraa aan is cafino.
Hindo: Alla macaanto waan kuu xiisaaya, Hana ilaawin markaa xaga tagto. Sacuudiga waa lagaa soo tar xiilaayaa anaaba og sariir baan kuusoo gog laayaa markaa xaga tago.
Mulki: inta qososhay bay tiri, Tarxiil waa istaahilkeena wadan walbo oo aan tagno in nalaka soo tufo. ani xitaa waan idiin xiisaayaa lanbarka xaga guriga aa ku dageysid ii qor Ana kan xaafada kuu qoraayaa
Hindo: waan ku siinaayaa. Hooyo iyo qaraabada igu salaam. Hada Aniga Khaalid iyo Asad dalkeenii baa iska aadaynaa. Burhaana buufis lee haayo.
Mulki: Alla naa Aniga buufis ima haayo mid aan jeclahay hadaan helo meelna maba aadeen.
Khaalid: haye asxaabta maxaa war heysiin. Waxa ar socdo ma ogtihiin?
Burhaan: maxaa dhacay baasaboorkii malagu soo hagaajiyayse?
Khaalid: ninkii lacagtaan aad ku baashaalaysaan idin siiyay Tv ga laga soo sii daayay isagoo la qabtay oo xabsiga loo taxaabay.
Mulki: Alla ma Kaabe?
Khaalid: haa waxaan ka xumahay in aanan waxbo u qaban karin.
Hindo: Miskiin hah kuwaan mar hadii uu gacantooda galo bes waaye kuwii aan ogaa yahuud waa ka xaasid san yihiin.
Mulki: wax badan baan kula taliyay iska daah… isaga meesha uu ku weynaaday waxay aheed Burcad Badeed nimo isagoo doon saaran oo tahriib ah baa reerkiisa dhan la wada baa’bi’yay.. ilaa iyo markaas doon lee waday.
Hindo: anaga waxba uma qaban karno waa arin laga naxo oo murugo.duco in aan ilaah u barino meehee si kale malahan.
Khaalid: waxa aad lacag heysaan keena ninka duco keliya idin kagama baahna ficil buu idin ka doonaayaa.
Asad: haa waa run inaa iska oydaan oo halkaan soo fadhidaan waa laga fiican yahay walaalkeena waa in aan nafteena u hurnaa.
Khaalid: saaxiib gacanta isii nafteena waan u huraynaa….
Burhaan iyo Asad gacanta bay isasaareen iyagoo ku heshiiyay in ay soo bad baadiyaan walaalkood soomaaliyeed.
Mulki: wax walbo haigu qaadatee, anigana waan idin kula jiraa…
Hindo: Ana maxaa i reebay.
Khaalid: meesha uu joogo ma naqaan balse wararka baan la soconeynaa maadama aan lacag heysanana waan laaluusheynaa wixii naga hor yimaado. inkastoo uu qaldan yahay oo uu burcad ahaa laakiin uma adkeysan karo nin shisheeya oo nin walaalkeyga gumeysanaayo.
Asad: saaxiib waa runtaa hada meel aan ka bilaawno ma naqaan balse wararka waan la soconeynaa. xabsiga lagu xiray meel walbo oo ku yaal waan kasoo saaraynaa.
Burhaan: abaal buu naga mudan yahay, aan is qaybino. Hada maadama qof sakaraad xanuunsan uusan nagu jirin. Asad waa socon kara khaalidna sidoo kale.
Khaalid: haa waa in aan is qaybinaa oo aan soo ogaanaa xabsiga lagu xiray. Anaga denbi walbo hanagu ahaato, waa in aan ka hor tagnaa.
Burhaan: Jadeyda xabsiga la yiraahdo buu ku xiran yahay…
Mulki: laakiin xabsigaas aad buu u weyn, qof lagama soo bixin karo.
Khaalid: xaaladu markaan waa adkaatay.meel aan ka bilowno ma naqaan.
Hindo: Alla mid baan kaa iloobay, sheekadaan baa i ilowsiisaye… Waxaa kusoo wacay qalbi.
Khaalid: wuu fahmay in ay tahay Fowziyo. Waa baaq ay isla yaqaaneen.
Hindo: hoo la hadal… Wuu kugu soo celinaayaa baan dhahay.
Khaalid: iga daah hadaan Waco xitaa Maxaan u sheegaayaa.
Hindo: wax lee sheeg adi adaa meesha ka atoore ah.
Khaalid: waxuu wacay lanbarkii Fowziyo oo ay kasoo wacday oo ahaa gurigii sodohdiis Fartuun…
Khaalid: waxaa uu aqoonsaday in uu yahay wiilkiisi curadka.wiilkeyga waa aabaahaa sidee ii tahay?
Yacquub: Aabe adiga maxaa iiga tagtay. hooyo way oydaa marwalbo adiga ku xasuusato.
Khaalid: waan kuu imaanaayaa, hooyada in ah oydo ka ilaali yaah.
Yacquub: Aabe adiga imaaw, Aabe iyo hooyo in aan heesto baan rabaa sida caruurta kale deriska.
Khaalid: waan imaanaayaa, adiga dartaa welibo.
Fowziyo: war Yaa la hadleysaa.
Yacquub: Aabe waaye hooyo hoo la hadal.
Fowziyo: khaalid maaba Aniga isoo wacay.
Khaalid: waxba adiga in aad murgootid looma baahna. Anigaa ku cidleeyay.caruurteena in ay aabe la’aan noqdaan Aniga ka danbeeyay.
Aniga iyo adiga dhexdeena wax xumaan ah mataal.
Fowziyo: Khaalid Aniga wax walbo oo dhacay hooyada……
Khaalid: adiga lagaagama baahna waxbo in aad ii sharaxdid. waxaa dhici doonto maalin sideeni hore aan kusoo laaban doono.
Fowziyo: Malaga yaaba in ay dhacdo. Anagoo dhexdeena xumaan aysan ka dhalan.
Khaalid: haa way dhacaysaa. Waan imaanaayaa Aniga caruurteena iyo adiga dartaa hooyaday waxay Khalad kaa gashay Anaa kaa raali gelinaayo xageeda.
La Soco Qeybaha Danbe ee Sheekada Iyo Kobciye.Com